काेराेना बीमा गर्नेकाे संख्या १० लाख नाघ्याे, यसरी गर्नुहाेस् कोरोना बीमा
सम्झना घिमिरे काठमाडाैं, ८ जेठ
कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै जाँदा मुलुकमा काेरोना बीमा गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । विशेष गरी उपत्यकामा सबैभन्दा धेरैले कोरोना बीमा गरेका छन् । अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने १० लाख ३० हजारले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् ।
नेपालमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिइरहेको अवस्थामा हरेक नेपालीले काेरोना बीमा गर्न आवश्यक छ । अहिले विशेषगरी कोरोना संक्रमण भएकाले वा स्वस्थ मानिस कसले गर्ने, लकडाउनको समयमा बीमा कसरी गर्ने, गरेपछि भुक्तानी कसरी पाइन्छ भन्ने जानकारी नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना बीमा गर्ने कमै छन् ।
आखिर लकडाउनको समयमा घरभित्रै बसेर कसरी भविष्यमा कोरोनाको संकटबाट आफूलाई बचाउन कोरोना बीमा गर्ने त ? यसका लागि सबैभन्दा पहिले कोरोना बीमा के हो र यसले कसरी सेवा दिन्छ ? त्यसबारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
के हो कोरोना बीमा ?
नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याइएको काेरोना बीमाले विशेष गरी कोरोना पुष्टि भएका बिरामीलाई बीमाअनुसार नि:शुल्क उपचार गर्ने नभएर बीमाबराबरको रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ । जस्तै: तपाईंले कोरोना बीमा गर्नुभएको छ र तपाईंलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भने तपाईंले बीमा गराएबापतको रकमकाे दाबी भुक्तानी पाउनुहुनेछ ।
खासगरी कोरोनाको संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरू औषधि खाने पैसा नभएर मर्नु नपरोस् भनेर नै काेराेना बीमा सञ्चालनमा ल्याइएको निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, 'खासगरी महामारीको समयमा बीमा लागू हुँदैन । तथापि हामीले काेराेनाको संक्रमणबाट औषधि खान नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर नै नयाँ बीमा पोलिसी जारी गरेका हाैँ । सोहीअनुसार अहिलेको यो कोरोनाको महामारीमा पनि बीमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।'
मुलुक कोरोनाको कहरबाट थप भयभीत हुँदै छ । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो विकासाेन्मुख देशमा सामान्य दिनमा पनि औषधि नपाएर मर्नेको संख्या कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा काेराेनाको संक्रमण फैलिँदै जाँदा आर्थिक संकट पनि उस्तै चुलिन सक्छ ।
आर्थिक संकट र कोरोना संक्रमण दुवैको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा कोरोना बीमाले तपाईंलाई केही राहत दिन सक्दछ ।
जस्तै: अहिले विभिन्न संघसंस्थाहरूले धमाधम कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । भविष्यमा रोजगार गुम्ने खतरा सबैमा मडारिइरहेको अवस्थामा तपाईंलाई कोराेना संक्रमण भइहाले पनि तपाईंले बीमा गरेको खण्डमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको रकम पाउनुहुनेछ । यसले तपाईंलाई औषधि खाने पैसाको जोहो हुन सक्छ ।
कस्तो अवस्थाका बिरामीहरूलाई यो बीमाले समेट्छ ?
यस्तो बीमाले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबै बिरामीलाई समेट्छ । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार कोरोना लागे वा नलागेको अवस्थामा तपाईंले बीमा गराउनुभएको छ भने बीमा गरेको १५ दिनपछाडि कोरोना संक्रमण देखिएमा बीमा कम्पनीले कतिको बीमा गरेको हो, सोहीअनुसारकाे बीमा रकम तुरून्त भुक्तानी गर्छ ।
वास्तवमा कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर नभएर यसले संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै बीमा गरेबापतको रकम दिन्छ ।
सर्वसाधारणले गर्दा कति शुल्क लाग्छ ?
सर्वसाधारणले काेराेना बीमा गराउँदा २ प्रकारका बीमा छनाेट गर्न सक्नेछन् । पहिलाे– ५० हजार रुपैयाँबराबरको र दाेस्राे– १ लाख रुपैयाँबराबरको बीमा ।
तपाईं ५० हजारको बीमा गराउँदै हुनुहुन्छ भने परिवारसहित तपाईंले जम्मा ३ सय रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । होइन, म परिवारका सबैकाे बीमा गर्दिनँ, आफ्नो मात्रै ५० हजार रुपैयाँबराबरकाे बीमा गराउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईंले ५ सय रूपैयाँ तिरेर कोरोना बीमा गर्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि नेपाली नागरिकताको फोटो र पैसा भए पुग्छ ।
त्यस्तै, १ लाखको बीमा गर्ने हो भने तपाईंले परिवारसहितको बीमा गर्दा ६ सय रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ ।त्यस्तै, तपाईं आफ्नो मात्र गर्दै हुनुहुन्छ भने १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कसरी पाउने सेवा ?
अहिले सबै जीवनबीमा तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले काेराेना बीमा गराइरहेका छन् । तपाईंले तीमध्ये जुनसुकै बीमा कम्पनीमा सम्पर्क गरेर कोराना बीमा गराउन सक्नुहुनेछ ।
बीमा गराइसकेपछि तपाईंलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएमा पुष्टि भएको रिपोर्टले दाबी भुक्तानी गर्नुभएपछि सम्बन्धित बीमा कम्पनीले तुरून्त बीमाबापतको रकम भुत्तानी गर्दछ ।
यसरी दाबी गर्नका लागि तपाईंले अनलाइनबाटै पनि बीमा दाबी गर्न सक्नहुनेछ । अहिले विभिन्न बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनबाटै बीमा र दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यदि बीमितको काेराेना संक्रमणका कारण मृत्यु भएमा परिवारले अनलाइनबाटै बीमाबापतकाे रकम दाबी गरे अनलाइनबाटै भुक्तानी पनि पाउन सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ८, २०७७, १५:३१:००
सामान्य विवादमा छुरा प्रहार गरी साथीको हत्या, ३ जना पक्राउ